/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / MMAF (Hydrochloride) (1415246-68-2)
SKU: 1415246-68-2. Category: R & D mmeghachi omume
Molekụla Formula: C39H66ClN5O8
Ọbara arọ: 768.42
Na Vivo: Ngo kachasị na ụmụ oke nke MMAF (1415246-68-2) (> 16 mg / kg) dị elu karịa MMAE (1 mg / kg). cAC10-L1-MMAF4 nwere MTD nke 50 mg / kg na ụmụ oke na 15 mg / kg na oke. CAC10-L4-MMAF4 ADC kwekọrọ na ya bụ obere nsí, nwere MTDs na ụmụ oke na oke nke> 150 mg / kg na 90 mg / kg na oke,
A na-agwọ sels na dilution serial nke mkpụrụ ndụ ule na oge 4-6 gbakwunyere na-adabere na mkpụrụ ndụ sel. Nyocha nke ntinye mkpụrụ ndụ na ntinye data iji wepụta ihe IC50 na-eme site na iji mgbarụ na-acha uhie uhie Alamar
Ụmụ oke: ọmụmụ na-egosi na mgbe ntanetị nke Karpas 299 ruru 300 mm3, ụmụ anụmanụ atọ na-enweta otu ọgwụ nke 10 mg antibody mpaghara / kg ibu ahụ nke cAC10-L1-MMAF4 ma ọ bụ cBR96-L1-MMAF (1415246-68-2 ) 4 na intravenously. A na-ewepụ tumors ma tinye ya na ezigbo okpomọkụ okpomọkụ, na akụkụ 5 μm-mkpa nke anụ ahụ na-egbuke egbuke site na iji nyocha nke immunohistochemistry
1 nyochaa maka MMAF (Hydrochloride) (1415246-68-2)
MMAF (Hydrochloride) ntụ ntụ bụ ihe ọmụma